Ukufundwa kwePsychic ye100% yasimahla: Iindawo ezili-10 zokufumana ukufundwa simahla kwePsychic kwi-Intanethi - Indlela Yokuphila
Eyona Indlela Yokuphila Isikhokelo ekuFundweni kwePsychic yasimahla kwi-Intanethi: Iindawo ezili-10 zokufumana iiPsychics ezibonelela ngokubonisana simahla
Isikhokelo ekuFundweni kwePsychic yasimahla kwi-Intanethi: Iindawo ezili-10 zokufumana iiPsychics ezibonelela ngokubonisana simahla
Ukufumana umbono ngekamva simahla kunokuvakala kulinga-kodwa kunokuba kuhle kakhulu ukuba ube yinyani. Nangona kunjalo, ukuba uyazi ukuba ujonge phi, unokufumana ukufundwa simahla kwe-psychic kwizikhokelo ezithembekileyo!
Kule nqaku, ndiza kuchaza ezona ndawo zibalaseleyo zokujonga ukufundwa simahla-kwaye yintoni ekufuneka uyazi ngohlobo ngalunye ngaphambi kokuba uzame.
Iindidi zokufundwa simahla kwi-Intanethi esiza kukugubungela kule posi:
Ukufundwa simahla koogqirha kuqeqesho olufana nolo lwee Isikolo se-LA soBugcisa boMoya
Isoftware kunye neeapps ezinikezela ukufundwa simahla kwetarot njenge Free-Tarot-Readings.net
Amaqela e-Facebook apho ungacela khona ukufundwa simahla.
Izilingo zasimahla zemizuzu emi-3 kunye noosiyazi abaqeqeshiweyo
Ngoku siza kugubungela olona hlobo lomgangatho wokufunda simahla, ezo uzifumana koosiyazi abaziingcali abafuna ukuziqhelanisa.
Ukufundwa simahla kwiiPsychics kuQeqesho
Ukwahluka kobuchule bengqondo
Njengama-salon ngamanye amaxesha anika iinwele ezinesaphulelo ezivela kubafundi bezobuhle, amaqela e-psychic kunye neekholeji ngamanye amaxesha zinokunikezelwa kwabafundi. Ngelixa amanqanaba etalente eyahluka, ezona nkqubo zibalaseleyo ziya kuba noochwephesha abaziingcali abongamela ukufundwa kwabafundi besikhokelo.
1. Isikolo saseLos Angeles soBugcisa boMoya Inkqubo yoQeqesho
Ngenkqubo yokucebisa, esi sikolo sibonelela ngokufundwa kwemizuzu eyi-10-30 kunye nabafundi baso. Ii-Psychics zibonelela kuphela ngokufunda okuphakathi, ukunxibelelana nabantu obathandayo abadlulileyo. Ungabhukisha idinga kwiwebhusayithi usebenzisa inkqubo yabo.
Mbini. Iziko lePsychic Horizons - UkuFunda ngeyure enye
Eli liziko likunika isifundo sasimahla, seyure enye kunye nesidanga sokuqala. Ukuba ukhetha ufundo lokuthweswa isidanga, ezo ziyafumaneka ngeedola ezingama-35, ngaphantsi kokufundwa kwengqondo ngengcali. Ukufundwa kucacile, kugxile kwi-aura yakho nakubomi obudlulileyo.
3. Iziganeko zePsychic
Khangela izifundiswa zengqondo kwindawo yakho ukufumana imicimbi yoqeqesho yasimahla. Umzekelo, eFlorida, iWaterstone Resort kunye neMarina yabamba simahla isiganeko seeyure eziphakathi . Ezi ntlobo zeminyhadala zifuna ukuba ungene ngesiqu sakho, ngenxa yoko uphando lwasekhaya lolona lubalaseleyo.
Ukufundwa simahla kwePsychic yiSoftware kunye neeNkqubo
Iyafikeleleka naphi na emhlabeni
Ngokubanzi, ayenzelwanga mntu
Iintengiso kunye nokuzivelela kunokwenzeka
Isenokuba nokutolika ngokungachanekanga
Kubantu abaninzi, ii -apps zasimahla ze-psychic kunye nesoftware kukungena kwabo okokuqala kufundo lwe-psychic. Ezi zilungele ukujonga imeko esisiseko. Nangona kunjalo, abanako ukusilela ukuqonda kunye nobunzulu bokufunda ngengqondo kwengqondo.
1. Iimpendulo ngeenkwenkwezi -Uthando lwaSimahla, uKhathalelo loMsebenzi, kunye noFundo lwemihla ngemihla lweTarot
Iimpendulo ngeenkwenkwezi zinika ulwazi ngeenkwenkwezi; Unokufumana nokufundwa simahla kwe-tarot kwindawo yabo. Ezi seshoni zijongana nemibuzo eyahlukeneyo ngobomi. Unokukhetha ukufundwa kwamakhadi e-3-tarot, ukufundwa kwe-tarot yokuphila, ukufunda i-tarot yokufunda, kunye nokufundwa kwamakhadi e-tarot yemihla ngemihla.
Mbini. Isimahla-tarot-reading.net -Ufundo lwasimahla lweTarot
Le ndawo ibonelela ngokufundwa simahla kweetarot kwi-intanethi kukhetho lwakho lweeteksi ezine. Usebenzisa amakhadi amathandathu avela kwi-arcana enkulu, le ndawo ibonelela ngokufundwa kwamakhadi e-tarot ukukuxelela indlela oziva ngayo ngawe, eyona nto uyifunayo ngoku, uloyiko lwakho, uyenzela ntoni, yintoni echasene nawe, kunye nesiphumo esinokubakho imeko yakho.
3. Ingqondo yePsychic -Ii-150 zombhalo oQalayo
Uhlelo lokusebenza lwasimahla lomfundi we-psychic lukunika iikhredithi zombhalo ezili-150 ukuqala kunye okanye zanele umbuzo omnye ngombhalo. Emva koko, unokuthenga ezinye iikhredithi ngaphakathi kweso sicelo ngokufunda isicatshulwa okanye ukufundwa kwamahhala kwengqondo kwi-intanethi.
Banikezela ngeebhonasi ngokuthenga imizuzu engama-25 okanye nangaphezulu. Uya kudinga ukubhalisa kwidilesi ye-imeyile ukuze usebenzise iapp.
Zine. Ukwahlula simahla -Ukufundwa kweTarot, iiRune Casts, iMahjong kunye nokunye
Ukwahlula simahla yindawo enika iintlobo ezisibhozo ezahlukeneyo zezixhobo ze-oracle: ukufundwa kwetotot, ukudlala amakhadi, ii-rune casts, i-Ching, Mahjong, ii-dominoes, i-Lemnisk8-Ball, kunye nenombolo yamanqaku anethamsanqa.
Ngokwahlulahlula simahla, ubuza umbuzo wakho kwaye uzifundele simahla ngokwengqondo. Ezinye zezixhobo, njengokufundwa kwetarot, zinokuphendula imibuzo evulekileyo. Abanye, njengeLemnisk8-Ibhola, bangcono ewe-hayi imibuzo.
5. I-Astro.CafeAstrology -Iinkonzo zokuQikelela simahla ezifumanekayo
Ukongeza kwizixhobo zeenkwenkwezi ezibonelelweyo, iCafeAstrology ikwabonelela ngeenkonzo ezimbini zokuxelwa kwangaphambili: Iinkwenkwezi zakho namhlanje, ekuxelela into onokuyilindela kwimeko yakho yangoku, kunye nenkcazo yohambo lweenkwenkwezi ohlangabezana nalo ngaphezulu kweentsuku ezili-14.
Zombini iinkonzo zisimahla, kwaye indawo igcina iprofayile yakho ngaphandle kwedilesi ye-imeyile ukuze ubuyele kufundisiso lwakho kamva.
6. CafeAstrology Iimpawu - Iimpendulo ezikhawulezileyo kwimibuzo elula
Inkqubo ye- Iimpendulo zoMlingo Oracle kwaye i Uthando Oracle kwiCafeAstrology inokubonelela ngeempendulo ezikhawulezileyo kwimibuzo esisiseko. Iimpendulo zoMlingo zezona zilungileyo xa u-ewe okanye akukho mbuzo, ngelixa i-Oracle yothando ibonelela ngokuqonda komphefumlo wakho osekwe kwi-cartomancy.
7. IArcana - Izixhobo ezahlukeneyo zeAstrology kunye nokusasazeka kweTarot
ILos Arcanos ibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokusasazeka kwetarot kunye nezixhobo zeenkwenkwezi ukunceda ukuphendula umbuzo wakho. Oku kunokuba lula njengokufundwa kuka-ewe-okanye-hayi kwitotot okanye kube nzima njengokusasazeka okunzulu kweCeltic Cross tarot.
Ukufundwa kwasimahla kwePsychic kwiMithombo yeendaba yeNtlalo
Ukuzonwabisa, ukufundeka ngokulula
Qhagamshela koosiyazi abaziwayo
Fumana ufundo naphi na
Ngaba kunokuba nzima ukuqinisekisa italente
Abanye oosiyazi baguqukele kwimithombo yeendaba zentlalo ukuze bakhe amashishini abo, bebonelela ngamaqela asimahla okanye ufundo lolingo kwi-intanethi. Kwiindawo ezinjenge-Instagram kunye ne-Facebook, unokuhlala ufumana oosiyazi abazimiseleyo ukwenza ukufunda okufutshane simahla! Khangela ii-hashtag ezinje#ukuhamba kunye #psychicreadings.
1. Ukufundwa kwasimahla kwePsychic kunye nokunxibelelana ngokomoya -Iqela leFacebook
Eli qela le-Facebook lidibanisa ii-psychics ezivela kwihlabathi liphela kunye nabathengi abafuna ukufundwa simahla. Nangona kungekho ntlawulo ngqo ngaphakathi kweqela ngokwalo, qiniseka ukuba uyayiqonda imigaqo yengqondo ngaphambi kokufudukela kwelinye iqonga; abanye bayabiza.
Mbini. I-Twin Flame Psychic -Uthando lwamahala, uKhathalelo loMsebenzi kunye nokuFunda ngokuBanzi
I-Twin Flame Psychic ivumela abaphulaphuli ababanzi ukuba bafumane ukufundwa simahla ngokwengqondo ngokwenza ufundo lweekhadi ezintathu zetarot. Njengombukeli, ukhetha ikhadi kwezi zithathu zitsaliwe; Umcebisi emva koko ucacisa ukubaluleka kwelo khadi. Oku kunokusebenza kubomi bakho bothando, ikhondo lomsebenzi, okanye imeko ngokubanzi.
3. Ukumkanikazi wePsychic Medium -Eyona ilungele iMibuzo malunga nothando
I-Psychic Media Queen ikhupha amakhadi kule veki anokufaka isicelo kuwe ngokubanzi okanye kwimibuzo ethile, enjengaleyo malunga nobomi bakho bothando. Njengokuba ubukele, ukhetha ikhadi lakho ngengqondo, emva koko umamele inkcazo yokubaluleka kwalo. Ukwabelana ngemiyalezo ngokubanzi kunye noqikelelo.
Zine. BarbsPsychicUkufunda -Ukufundwa malunga nosapho, uthando, umsebenzi kunye nokunye
IBarb ibonelela ngokufundwa simahla ngeMivulo (nge-8 pm ixesha laseBrisbane, nge-6 kusasa ngexesha laseNew York). Unokufumana ukufundwa simahla kwi-Intanethi malunga nosapho, uthando, ikhondo lomsebenzi, okanye eminye imicimbi ngokungenisa umbuzo kwangaphambili, awukhethe ngokungacwangciswanga ngexesha leseshoni. Ukwakhupha amakhadi amathathu ukulungiselela ababukeli ngokubanzi ukuba bakhethe kuwo.
5. Zonke iinkonzo ze-intanethi - Abaqalayo ngeenkwenkwezi
Ukuvumisa ngeenkwenkwezi okungoyena mqali kumaqonga onxibelelwano, iAllastrology ibonelela ngesibhengezo simahla senyanga ngeenkwenkwezi ngophawu, ukwenza ividiyo eyenzelwe yona egxile kumandla aphambili kwiindawo ezahlukeneyo zobomi bakho kuxhomekeke kukuhamba: ukusuka kuthando ukuya kwimali ukuya kwipropathi.
Ukufundwa simahla kwePsychic ngePychic Professional (Isilingo sasimahla)
Ingcali, oosiyazi abavavanyiweyo
Izilingo zihlala zifutshane
Amaxabiso anokuphakama emva kwetyala
Unokufuna ikhadi lekhredithi
Amaqonga e-psychic amiselweyo ahlala enikezela ngohlobo oluthile lokufundwa kwengqondo simahla ngohlobo lwesithembiso solingo. Ezi zinokuhlala naphi na ukusuka kwimizuzu emithathu ukuya kwelishumi, ngenxa yoko zilungele ukuzama i-psychic entsha okanye ukuphendula umbuzo omnye.
1. UKasamba Incoko yasimahla yePsychic
UKasamba unikezela ngemizuzu emithathu yengxoxo yasimahla yengqondo. Indawo ayikhawuli ukuba bangaphi abacebisi onokuthi uzame le sibonelelo: uya kufumana isibonelelo sasimahla kunye nomcebisi ngamnye omtsha ozama. Ukufundwa kwabo simahla kusetyenziswa ingxoxo ebukhoma.
>> Inxulumene: Funda ezigqityiweyo Uphengululo lweKasamba .
Mbini. Buza ngoku Imizuzu engama-30 ye- $ 30
I-AskNow ikunika imizuzu emihlanu yasimahla xa uthenga iMizuzu engama-30 ngeedola ezingama-30. Iqonga labo liyakudibanisa nomcebisi ophilayo, ukuze ukwazi ukufunda ngokuxoxa okanye ukufowuna.
Ukubona ukuba loluphi ukhetho onokulufunda simahla, jonga ukuze ubone ukuba ngawaphi amaqhosha afumanekayo okufundayo onomdla kuwo.
>> Inxulumene: Funda ezigqityiweyo Buza ngoku ngoku .
3. Umthombo weengqondo Imizuzu yasimahla yaBafowuni beXesha lokuQala
Umthombo wePsychic ubonelela ngemizuzu emithathu yasimahla yokufunda kwakho okokuqala, eqhubeka ukuqala kwi- $ 1 ngomzuzu. Unokunxibelelana nabafundi besimahla be-psychic ngokusebenzisa inqaku labo lokunditsalela umnxeba, apho umcebisi abiza umnxeba kwifowuni yakho, okanye ungathatha inxaxheba kwincoko ephilayo kwi-Intanethi kunxibelelwano lomyalezo.
>> Inxulumene: Funda ezigqityiweyo UPhononongo loMthombo wePsychic .
Zine. Ndinomdla Ukufundwa kweMizuzu eyi-10 nge $ 1.99
UKeen ubonelela ngezihlomelo ezibini zentshayelelo: imizuzu emithathu yokufunda ngokukhululekileyo kubacebisi ngezengqondo OKANYE kwimizuzu yokuqala eli-10 yokufunda $ 1.99. Kuxhomekeka ekubeni ufuna ukuthetha ixesha elingakanani, oku kunokuthetha ukuba ufumana imizuzu eyongezelelweyo yasimahla. Unokukhetha ukufumana umnxeba ovela kumcebisi okanye ufunde ngokukhululekileyo ngencoko ebukhoma.
>> Inxulumene: Funda ezigqityiweyo Uphengululo olunomdla .
5. Oranum -Iikhredithi zasimahla xa ubhalisile
I-Oranum isebenzisa inkqubo yekhredithi kwaye inikezela ngeekhredithi zasimahla ze-9.99. Oku kuguqulela kwimizuzu eli-10, imizuzu emi-5, okanye imizuzu emi-3, kuxhomekeke kwinqanaba lomcebisi omkhethileyo. I-Oranum liqonga lewebhu elibukhoma, ke abacebisi babo babonelela kuphela ngeengxoxo zevidiyo.
Ukufundwa simahla kwePsychic nge-imeyile
Akukho lungiselelo lifunekayo
Iimpendulo zisenokuba mfutshane
Amanye amaqonga e-psychic aqalile ukwenza amasebe kwaye anikezela ngokufundwa simahla nge-imeyile. Ngelixa oku kunika isixa esikhulu sokuguquguquka kunye nokuba ngasese, inokusikelwa umda, njengoko imibuzo elandelayo iya kubiza iindleko zokuphendula.
1. Ingqondo yePsychic Imizuzu yasimahla eneXabiso lePhakheji
Indawo inikezela ngemizuzu emithathu simahla xa uthenga ipakethe yexabiso. Esi sibonelelo sokwazisa sikuvumela ukuba ufumane impendulo kumbuzo we-imeyile ovela kwenye yeengqondo zabo ezikwi-Intanethi nge- $ 4.99.
Mbini. Ndinomdla -Incoko yasimahla iyafumaneka ukuseta ukufundwa kwengqondo
Inkqubo yemeyile kaKeen ikuvumela ukuba unxibelelane nabacebisi ngeendlela ezihlawulelwayo nezingahlawulwanga. Imiyalezo engabhatalwanga ikunceda ukuba usete ukufundwa ngelixa uhlawulela ukufundwa ngokwakho.
Ukuba nomcebisi uphendula umbuzo, ungathumela intlawulo ngekhadi letyala kwangaphambili okanye uhlawule ukujonga i-imeyile emva kokuba umcebisi eyithumele kuwe. Abacebisi ngokubanzi bahlawulisa ngombuzo ngamnye.
Ukufundwa kwasimahla kwePsychic ngefowuni
Ukutsalela umnxeba igqirha yeyona ndlela ilungileyo yokwenza ukuba umbuzo uphendulwe ngokukhawuleza. Ngeemvavanyo zasimahla ezinikezelwa ngamanye amaqonga ezengqondo, uya kuba nakho ukunxibelelana phezulu izangoma zefowuni ngaphandle kweendleko. Gcina ukhumbula ukuba ukuya ngaphaya kwesithembiso sokuqala kunokubiza imali, nangona kunjalo.
1. Buza ngoku - (888) 815-1999
Xa ufowunela u-Asknow, uya kufumana ithuba lokufunda simahla kwimizuzu emi-5, ixesha elaneleyo lokuphendula umbuzo omnye kakuhle. Bacela ikhadi lakho letyala ngaphambi kokuba baqale ukufunda, kodwa ndiyakuqinisekisa ukuba abakubizi mali xa uhlala phantsi komda wemizuzu emihlanu; Banayo ne-beep ehamba phambi komzuzu wemizuzu emihlanu ukukuxwayisa.
Mbini. Umthombo weengqondo -Ukufunda ngokuFutshane Simahla
Umthombo wePsychic ubonelela ngemizuzu emithathu yokufunda kwengqondo simahla. Ukufumana umfundi okhoyo ukuthatha iifowuni, yiya kwiphepha lasekhaya okanye kudweliso lodidi kwaye ujonge iqhosha lokufowuna, emva koko ucofe kulo ukunxibelelana nomoya osebenza kwi-Intanethi.
3. Ndinomdla -Imizuzu emithathu yokuqala yasimahla
U-Keen ubonelela ngemizuzu emithathu yokuqala yeseshoni yakho ye-psychic ekwi-Intanethi simahla. Fumana umfundi wasimahla we-psychic ofuna ukuthetha naye, emva koko usebenzise iqhosha lokufowuna ngoku. Kwimizuzwana embalwa, uya kufumana umnxeba ovela kuloo mcebisi. Unokucwangcisa ukuqeshwa nomcebisi endaweni yoko.
Zine. IiPsychics zaseCalifornia -Intshayelelo Zokunikezela ziyafumaneka
Isingeniso seCalifornia Psychics ($ 1, $ 2, okanye i- $ 4 ngomzuzu endaweni ye- $ 5, $ 6.50, okanye i- $ 8.50 ngomzuzu) ayikuniki mizuzu yasimahla-kodwa ukuba unomnxeba omde, uya kugcina ukonga imali eninzi kangangokuba amaxabiso anokusebenza ukuze kuzuze wena.
Unokwenza idinga lokuqeshwa kwiveki ezayo okanye ucele ukuphinda ubuye, akubeke kuluhlu lokulinda xa i-psychic ekwi-Intanethi ikhululeka.
5. LifeReader -Upto 50% icinyiwe
I-LifeReader ibonelela nge-50% isaphulelo kunye nemizuzu emi-4 yasimahla yengxoxo okanye i-50% icinyiwe kunye nefowuni yakho yokuqala kwi- $ 0.19 ngomzuzu. Ukuze usebenzise le nkonzo, okokuqala, bhalisa eyona nombolo yefowuni ilungileyo kwisithuba seakhawunti yakho. Emva koko, fumana umcebisi onqwenela ukuthetha naye kwaye ucofe umnxeba.
Ukufundwa kwasimahla kwePsychic ngeNgxoxo
Nxibelelana ngexesha lakho
Ngaba uzive ungenamntu
Ukubonelelwa ngovavanyo akunakusebenza
Ngokwandayo, amaqonga e-psychic andisa uvavanyo lwazo lokubandakanya ukufundwa kwengxoxo. Ukuba ukhetha ukuthumela imiyalezo ngefowuni, olu lukhetho olufanelekileyo kuwe ukuze ufumane impendulo ekhawulezileyo nenempumelelo kumbuzo osisiseko.
1. UKasamba Imizuzu emi-3 yasimahla kunye nawuphi na uMcebisi
UKasamba ubonelela ngemizuzu emithathu yasimahla yengxoxo yengqondo kunye nawuphi na umcebisi kwiwebhusayithi yabo. Oku kuqinisekisa ukuba unokufumana oyena mntu uphendulayo imibuzo ngobomi bakho. Iqonga labo lengxoxo likuvumela ukuba wabelane ngendawo efanayo kunye ne-psychic ekwi-intanethi, ukuze ubone ukuthayipha okucacileyo.
Mbini. Buza ngoku -Imicimbi emihlanu yokuFunda ngePsychic
I-AskNow ibonelela ngemizuzu emihlanu yasimahla xa uthenga imizuzu engama-30 ngeedola ezingama-30. Kuba banikezela ngengxoxo kunye nokufowuna iinkonzo, qinisekisa ukuba umcebisi wakho uyafumaneka ukuze ancokole ngokujonga iqhosha leNgxoxo kwiprofayile yabo, emva koko ucofe kuyo ukuze uqhagamshele.
3. Umthombo weengqondo -UkuFunda okuFutshane kweMizuzu emiThathu yokuFunda
Umthombo wePsychic ukunika imizuzu emithathu yasimahla nomcebisi. Ukufundwa kwengxoxo, uya kusebenzisa i-intanethi ye-intanethi, efana nokuthumela imiyalezo. Xa ugqibile ukufunda, uyakufumana isicatshulwa sengxoxo ukuze uphinde ufunde.
Zine. Ndinomdla -Ukufundwa kwePsychic ngeNgxoxo ekhawulezileyo
U-Keen ubonelela ngemizuzu yokuqala emithathu yokufunda kwakho simahla. Banikezela umyalezo okhawulezileyo wokuvumela ukuba uthethe nomcebisi wakho ngaphakathi kwisikhangeli sakho, ngenxa yoko akuyi kufuna ukukhuphela nasiphi na isoftware okanye iiapps. Ukufumana umcebisi onokuthi ancokole, khangela i Ingxoxo ngoku iqhosha kwiprofayili yabo.
5. Imvakalelo yokuqonda -Imizuzu emi-5 yaSimahla yaBatsaleli beXesha lokuQala
I-Mystic Sense yenza imizuzu emihlanu yeseshoni yakho yokuqala yasimahla. Ayizizo zonke iingqondo zabo ezinikezela ngeenkonzo zokuncokola. Ukufumana umntu owenzayo, khangela umfanekiso wengxoxo yeorenji phantsi kweprofayili yabo. Xa umcebisi ekwi-Intanethi, ichaphaza eliluhlaza libonisa ngefoto yabo.
Ukufundwa mahala kwePsychic Psych
Ayingawo onke amaqonga / oosiyazi abanikezela ividiyo
Imiba yezobuchwephesha inokudanisa
Hayi ngasese njengezinye iindlela
Ukuba uyayithanda i-FaceTime kunye nezinye iinkonzo zeencoko zevidiyo, ukufundwa kwevidiyo simahla kunokuba kukulungele. Njengoko ujonga ukufundwa, qiniseka ukuba ujonga ubuchwephesha bokuqinisekisa ukuba unokunxibelelana nomoya oyikhethileyo.
1. Oranum -Iikhredithi zasimahla xa usayina
I-Oranum ikunika iikhredithi zasimahla ze-9.99 xa ubhalisa: oku kuphakathi kwemizuzu emi-3 ukuya kweli-10, kuxhomekeke kwinqanaba lomcebisi wakho. Iingqondo zabo zisebenzisa ii-webcam kunye nee-camcorder ukwenza ukutya okukhoyo kwi-Intanethi. Uya kudinga iAdobe Flash kwikhompyuter yakho ukuze ufumane ukufundwa kwevidiyo.
Mbini. Umthombo weengqondo -Ukufundwa kwePsychic kwi- $ 1 Ngcaciso eMfutshane
Umthombo wePsychic ubonelela ngemizuzu emithathu yasimahla, emva koko inqanaba lokwazisa eliqala kwi- $ 1 ngomzuzu. Fumana umcebisi okhoyo ngeqhosha leVidiyo eluhlaza, emva koko uqhagamshele usebenzisa i-Psychic Source ujongano kwisikhangeli.
3. Imvakalelo yokuqonda -UkuFunda okuFutshane kweMizuzu emihlanu ngePsychic
I-Mystic Sense ibonelela ngemizuzu emihlanu yasimahla yokufundwa kwengqondo kwiseshoni yakho yokuqala. Ukufumana umcebisi wevidiyo okhoyo, jonga i icon yevidiyo emfusa phantsi kweprofayili, emva koko ucofe kwiprofayili ngolwazi oluthe kratya. Xa umcebisi ekwi-Intanethi, ichaphaza eliluhlaza libonisa ngefoto yabo.
Isikhokelo soFundo lwaSimahla lwePsychic
Ezi zinikezelo zasimahla zasimahla ze-psychic zonke zisemthethweni kuba zibonelela ngeendlela zokufunda simahla. Njengoko ujonga esona sipho silungileyo, qiniseka ukuba ufunda nayiphi na imiqathango kunye neemeko ezithile, njengoko ezinye zinokufuna ukuba uthenge imizuzu ukufumana isithembiso okanye ukufaka ulwazi lwekhadi letyala ngaphambi kokuqala.
Ukuba ukufunda kwakho ngokukhululekileyo kwengqondo kunomda kwaye awunomdla ekuthengeni imizuzu eyongezelelweyo, qinisekisa ukuba umbuzo wakho unciphise ngokwaneleyo ukuze umcebisi awuphendule ngexesha elibekiweyo. Kuyo yonke iseshoni, gcina iliso elibukhali ngexesha okanye usete ixesha lokukukwazisa xa isibonelelo simahla siphelile, ukuze ikhadi lakho letyala lingabizwa.
Ndazi njani ukuba loluphi uhlobo lokuFunda ngePsychic olulungele mna?
Ngenxa yokuba ukufundwa kwengqondo kusondele, kubalulekile ukuba ukhululeke kwaye ukhululeke ukuze ukufunda kwakho kube nemveliso kakhulu. Ngale nto engqondweni, cinga ngendlela othanda ngayo ukucela iingcebiso kubahlobo okanye kumalungu osapho. Ngaba kunokwenzeka ukuba uthathe ifowuni okanye uthumele i-imeyile? Sebenzisa isicatshulwa okanye imidiya yoluntu?
Kwangelo xesha, ukufundwa kwengqondo kuyinkonzo yobungcali, ke kubalulekile ukuba uzibuze ukuba uthanda ukusebenza njani kuseto lobungcali. Ngaba ungakhetha ukubuza umntu osebenza naye ngombuzo nge-Zoom okanye kwifowuni?
Ukuba iimpendulo zakho kule mibuzo zahlukile, kungafuneka uzame izibonelelo ezahlukeneyo zasimahla ukuze ufumane ukuba loluphi uhlobo lokufunda ngengqondo olulungele wena. Ukuba uneentloni malunga nokwabelana ngemibuzo kunye nogqirha, incoko yeyona ndawo ilula yokungena.
Leliphi icandelo lokuFunda olona luPhambili kolu luhlu?
Ukufundwa nomntu ophilileyo lolona hlobo lubalaseleyo lokufundwa kwengqondo. Ngenxa yokuba umcebisi ukhona kwangaxeshanye ukhona, banokufunda amandla akho, besebenzisa izakhono zabo kunye nezixhobo zokufumana iimpendulo kwimibuzo yakho. Abacebisi kwezi ndawo nabo bayaphicothwa, ke unokuqiniseka ukuba usebenza nenye yezona ndawo zibalaseleyo ze-Intanethi ezikhoyo.
Ukongeza, kukho iintlobo ngeentlobo zeqonga ezikhoyo zokufunda bukhoma, ukusuka kwingxoxo ukuya kwifowuni ukuya kwividiyo. Oku kuqinisekisa ukuba unokufumana indlela eyiyo yonxibelelwano ukuze ukwazi ukuvula ngokupheleleyo umcebisi.
Ufundo ngesoftware kunye neeapps ziyanceda kuba zinokubiza imali encinci kwaye zifumaneke ngawo onke amaxesha. Nangona kunjalo, bahlala bengenalo uhlobo lotoliko lomntu olunokubonelelwa ngumcebisi ophilayo, olukhokelela ekudidekeni okanye nasekufundeni okungalunganga ukuba awunamava ngezixhobo.
Yintoni endifanele ndiyibuze ngexesha leseshoni yokuFunda Simahla?
Abasebenzisi bahlala befumanisa ukuba ukufunda kwabo kuluncedo kakhulu xa benemibuzo ethile kumcebisi wabo. Oku kunokuba neenkcukacha kakhulu (Yintoni ekufuneka ndiyazi ngothando lwam no-X?) Okanye ngokubanzi (Kuya kwenzeka ntoni ngobomi bam bothando?).
Ukufumanisa umbuzo okanye imibuzo ekufuneka uyibuze, qala ngokujonga nayiphi na indawo ebomini bakho ebangela ukuba ube nexhala. Oku kunokuba luthando, umsebenzi, usapho, okanye enye into.
Emva koko, nciphisa ulwazi malunga nale ndawo olunokukunceda. Umzekelo, unokufuna ukwazi ukuba loluphi uhlobo lobudlelwane obunothando nomntu othile, okanye ungafuna ukwazi ukuba kufuneka uphonononge ukhetho olutsha lomsebenzi.
Okokugqibela, beka phambili imibuzo yakho. Ukuba unombuzo ongaphezulu komnye, umcebisi usenokungakwazi ukuwuphendula kwiseshoni enye yasimahla. Endaweni yoko, kuya kufuneka uhlawule ixesha elongezelelweyo okanye uzame enye into yasimahla. Ngokudwelisa imibuzo yakho ngokokubaluleka, uya kuqinisekisa ukuba uyayilungisa eyona micimbi iphambili ngexesha elibekiweyo.
Ilizwi lokugqibela ekufumaneni iPsychic yokuFunda simahla
Ukufundwa kwengqondo simahla kukunika indlela eyonwabisayo yokuzama amaqonga ahlukeneyo kunye nabacebisi. Uya kufumana ezona ziphumo zibalaseleyo kukufundwa kwengqondo okukhoyo, kodwa isoftware kunye namanye amaqonga anendawo yawo xa ufuna iimpendulo zasimahla kwangoko.
Ngaba ukhe wazama ukufundwa simahla kwe-psychic ngaphambili? Ucinga ntoni? Sitshele ngamava akho kwizimvo!
UGoogle Doodle ubhiyozela uHumorist waseMexico 'uChespirito' kunye noMboniso wakhe oyiNtanda weSketch
Ngubani omele u-Selena Gomez uMhla emva kweVeki? Nazi iindlela ezi-5 onokukhetha kuzo
UBill Clinton's Racist Defence of the 'Super-Predator' Intsomi
'Umceli mngeni: Ukuhlaselwa kweeNtshatsheli' Ukuphindaphinda, Isiqendu 9: Igosa kunye neGentlewoman
Uyenza njani inombolo yokukhangela yefowuni
frank landau umfazi olungileyo
imiqondiso yokusebenza kwesibindi
zeziphi iimfazwe ezilahlekileyo eMelika